QGIS Makosi - Geofumadas
ArcGIS Pro uye QGIS 3 kosi - nezve zvakafanana mabasa
Dzidza GIS uchishandisa ese ari maviri mapurogiramu, iine yakafanana data modhi Nyevero Kosi yeQGIS yakatanga kugadzirwa muchiSpanish, ichitevera zvakafanana zvidzidzo seyakakurumbira kosi yeChirungu Dzidza ArcGIS Pro Nyore! Takazviitira kuratidza kuti zvese izvi zvinogona kuitika uchishandisa yakavhurika software; nguva dzose muchiSpanish Ipapo, vamwe vashandisi ve ...
Makosi - Geospatial Zvidzidzo zveAcGGIS QGIS zvidzidzo
Dzidza kushandisa QGIS kuburikidza nemaitiro anoshanda eGeographic Information Systems uchishandisa QGIS. -Ise maekisesaizi iwe aunogona kuita muArcGIS Pro, yakaitwa neemahara software. -Import CAD data kuGIS -Attribute-based theming -Rule-based kuverenga --Print dhizaini -Import inoratidzira kubva kuExcel -Scanning matipi -Georeference mifananidzo Mafaira ese ...
Makosi - Geospatial QGIS zvidzidzo
Blender kosi - Guta uye mamiriro ekuenzanisira
Blender 3D Nedzidzo iyi, vadzidzi vanodzidza kushandisa maturusi ese ekuenzanisira zvinhu mu3D, kuburikidza ...